Qubsuma koo 17: Namaa miti magaalaa horiif bakka laattu keessa jiraachuun na ajaa'iba - BBC News Afaan Oromoo
Qubsuma koo 17: Namaa miti magaalaa horiif bakka laattu keessa jiraachuun na ajaa'iba
Image copyright Hewan Wole
Maqaankoo Hewaan Walee jedhama, wayita ammaa biyya Tuurk magaalaa Istaanbul keessan jiraadha. Itoophiyaa irraa eegan dhufee waggoota kudhan lakkoofsiseera.
Jalqaba irratti carraa barnoota argachuun ture gara Morookoo kanan deemee. Waggaa saddet achi turee ergan hojii argadhee booda sagantaa adda ta'e tokkoon gara Istaanbul akkan dhufu ergan ta'e kunoo waggaa tokkoofi walakkaa ta'eera.
Kanan baradhe waa'ee qorichaa ykn faarmaasii waan ta'eef yeroo ammaatti industrii faarmaasii keessan hojjechaa jira. Hojiin koos dijitaal markeetiing wayita ta'u qoricha gurgurti.
Namoonni biyya kanaa akkuma kan biyya keenyaa namoota jaallachuufi simachuu aadaa kan godhataniidha. Haa ta'u malee, Istaanbuliin Finfinnee waliin madaaluun guddoo natti ulfaata.
Goodayyaa suuraa Istanbuul ardii lama irra kan jirtu taatuyyu riqichaa walqunnamsiisu qabdi
Magaaloonni lamaan kun bareedinaafi simboo mataa isaanii haa qabaataniyyuu malee irra caalaa kan adda isaan godhu addunyaa irratti biyya/magaalaa ardii lama kessatti argamtu ta'u isaati.
Boosfooras lagni jedhamu Istaanbuliin gama tokkoon Awurooppaa keessa wayita ishee oolchuu gama biroon ammoo gama Eshiyaa keessa ishee oolcha. Kun ammo daran akka bareeddu ishee godhe. Keessattu magaalaa bishaaniin marfamte waan tateef natti tolti.
Magaalaan finfinnee gamoo hedduutu keessatti ijaaramaa jira, Istaanbuul garu ijaarsa xumuruun gara magaalaa bareechuutti ceeteetti. Mukkeewwan addaa addaa kan of keessa qaban bakkeewwan bashannana ummataa hedduu qabdi.
Kana malees naannoo bishaan/galaanichattii naanna'ee karaan bishkileetti irra oofan qaba.
Goodayyaa suuraa Bakka bashanana uumataa
Nyaanni Tuurkii keessatti beekama ta'e keessaa tokko Keebaab yookaan Doonaar jedhamuun isa beekamuudha. Anis nyaata kana guddoon jaaladha.
Gosi nyaataa kun biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti kan beekame ta'uyyuu, Tuurk garuu giddu galeessa Kebaabiiti jechuun ni danda'ama.
Kebaab kun foon loonii haalaan erga bilchaateefi mi'eessituu adda addaa waliin erga hojjetamee booda waan akka maxinoo/qixxaan maramee kan dhihaatudha.
Hunda caalaa kanan nyaachuu jaaladhu ammoo mi'ooftuu isaaniiti - kan akka keekii. Tuurk keessa mi'ooftuu gosa hedduu jiran keessa bakilaavaa guddoon jaaladha.
Goodayyaa suuraa Baakilaavaa (kan bitaatti mul'atu ), Kebeeb yookaan Doonar (kan mirgaa mul'atu)
Maatiikoo yoon yaadeyyuu, waldaa kiristaanaa deemuu gaafan yaadu irra caalaan biyyakoo yaadadha. As manni sagadaa kan kiyya jettu argachuun cimaadha.
Ta'us yeroon biyyakoo yaaduufi yaada kuusu karaa fooddaa ala ilaaluun jaaladha.
Magaalattiin gamoo guutuu waan taateef yeroo baay'ee kanan argu gamoowwan hedduu qofa. Haa ta'u malee, bakka ol ka'a irra waanan jiraadhuuf kessattuu galgala as gad wayita ibsaa ishee ilaalu natti tola.
Goodayyaa suuraa Magaalaan Istaanbul galgala ibsaan bareeddee mul'atti
Biyya kana keessatti horiif keessattuu kan akka sar'eef kabajaafi iddoon isaan kennan guddaa na ajaa'ibsiisa. An nama jaalala horii guddoo qabu hinturre, asitti garuu ilaalchikoo geeddaramaa jira.
Sareewwan daandii magaalaa irratti argamanillee siritti nyaata argatu, bishaanis ni argatu, yaalii fayyaas kan guutuutti kennamuuf hedduun arga.
Kun baay'ee waan na dinqisiisaa tureef wayitan namoota gaafadhu mootummaa biyyattiin gargaarsi barbaachisaa akka godhamuuf natti himan.
Magaalatti keessatti kan argaman bakkeewwan bashannanaa gurguddoonis sarootaaf mijeeffamanii kan hojjetamaniidha. Kana qofa miti kan na ajaa'ibsiise, wayita cabbiin bu'uttis bakkeewwan gabaa hundii bakka jireenya saroota kana ta'uun tajaajilu.
Nama irra darbee horiif illee magaalaa mijataa ta'e keessa jiraachuunkoo baay'ee na ajaa'ibsiisa.
Utuun aangoo addaa tokko qabaadhe, magaalaa kana keessa wantan jijjiruu barbaadu yoo jiraate konkolaataa karaa irra baay'achuun rakkoo fidu hir'isuudha.
Magaalattiin ardii lama irratti waan ijaaramteef namoonni gama tokko jiraachaa gama birootti waan hojjetaniif yeroo baay'ee namoonni karaa irra ni baay'atu.
Meetroo yookaan karaa baburaa lafa jalaa waan jiruuf anillee hedduu hinrakkadhu. Ta'uyyuu wayita hojii akkasumas barumsaa bahani karaan ni cufama.
Waqtiin qorraas guddoo na dhiphisa, kunis ta'e jaalala Istaanbuliif qabu tasayyuu hin hir'isu.
Kana irratti ammo namaaf jaalala gudda waan qabaniif wanti hundi akka natti salphatu ta'eera. Akka carraa ta'e namoota beeku waanan argadheefi isaanis waan na jaalataniif Istaanbuul keessa jireenya baruun naaf salphate.
Kan akka haadha ofii essattiyyuu waan hin argamneef utuu wanti bute Itoophiyaa na buusu jiraate, kaasuu haadha koo keessatti of-arguun barbaada.